Ingabe Isu Lakho Lokumaketha Okuqukethwe Lika-2015 Liyazemboza Lezi Zitayela? | Martech Zone
NgoLwesithathu, Januwari 28, 2015 NgoLwesithathu, Januwari 28, 2015 Douglas Karr
Ukukhangisa Okuqukethwe uhola iphakethe kumathrendi wokukhangisa wedijithali wango-2015, alandelwe yi-Big Data, i-imeyili, i-Marketing Automation ne-Mobile. Akumangalisi-ke ukuthi lokho kuqala kubonakaliswa yi-ejensi yethu lapho besilokhu senza khona i- Idatha enkulu iphrojekthi esiyenzele umshicileli omkhulu online. Idatha enkulu iba yisidingo nje ngenxa yevolumu nokushesha kwedatha esikuqongelelayo nokuyihlaziya ukuze sibikezele futhi sibike ukusebenza kwemizamo yokuthengisa okuqukethwe.
Amabhizinisi avela kuzo zonke izimakethe nama-verticals enza izinhlelo eziqinile zokuthuthukisa imizamo yabo yokuthengisa okuqukethwe, njengabakhangisi be-B2B bakhuphula amabhajethi wabo wokuqukethwe nokudala okuqukethwe okuningi kunalokho abake bakwenza ngaphambilini. Ngisho nemikhiqizo emikhulu iyajoyina kulo mbango, njengoba okungenani i-69% ikhulisa ngokuqinile ukukhiqizwa kokuqukethwe kwayo futhi isazoqhubeka nokwenza njalo ngonyaka we-2015. UJomer Gregorio, uCJG Marketing Marketing
I-CJG ikhombe Amathrendi Wokumaketha Okuqukethwe ayisishiyagalombili ajwayelekile kumasu okukhangisa okuqukethwe kulo nyaka:
Okuqukethwe Marketing kuzoba ngaphezulu okubhekiswe futhi okomuntu siqu.
I-Content Marketing izosebenzisa okuningi ukubekwa okukhokhelwayo.
I-Content Marketing izosebenzisa okuningi ukuzenzekelayo kokuzenzekelayo.
I-Content Marketing izosebenzisa okuningi ababhali abangochwepheshe.
I-Content Marketing izogxila kakhulu ukusatshalaliswa.
I-Content Marketing izoshada marketing media social.
Okuqukethwe Marketing kuzoba boom nge ukumaketha amaselula.
Ukukhangiswa kokuqukethwe kuzohamba nge-supernova ngokuxoxa izindaba.
Tags: 2015Ukukhangisa Okuqukethweizitayela zokumaketha kokuqukethwe
Amaqhinga we-7 Wokukhuthaza Ukudalwa Kwakho Okuqukethwe
Feb 4, 2015 ngo-6: 09 AM
Nayi incazelo enhle kakhulu mayelana namathrendi wanamuhla wokumaketha kokuqukethwe.Ngicabanga ukuthi lawa maqhinga ayisishiyagalombili wokumaketha okuqukethwe ayasiza kithi futhi manje-manje-konke lokhu kubaluleke kakhulu kunoma yikuphi ukumaketha. Futhi ukumelwa kwe-Info-graphic kunikezwa okuhle kakhulu.Siyabonga nge-athikili enhle kangaka!
Ngo-Apr 13, i-2015 ku-9: 21 AM
Akungabazeki ukuthi okuqukethwe kunguwoyela wewebhusayithi yakho ngakho-ke kufanele uqiniseke ukuthi usebenzisa uphethiloli wekhwalithi ukuze usebenze kahle kuwebhusayithi. Ngokufana nalokhu, lapha uchaze zonke izici zokumaketha kokuqukethwe ngamathrendi wakamuva.